လူကို သနားရမလား ..း)
Wish Good Luck!!
ကားကိုကဗျာရေးခိုင်းပြီး လူကို ဘရိတ်ရှုးလဲလိုက်ပါး)
ကားအကြောင်းတော့ ဘာမှမသိလို့ မပြောပြတတ်ပါ အကိုရေ...ကားစီးရင် ခေါင်းမူးတတ် လို့ ကားတော့ လုံးဝမစီးချင်ပါ...ကားဘရိတ်အကြောင်းမပြောနိုင်လို့ ဆောရီးအကိုကြီး...
ကားမောင်းရင်းကဗျာတွေအတွေးထဲ ၀င်ရတာနဲ့ ကားဘရိတ်မီးမကောင်းတာနဲ့ အကို့အတွက် သတိထားစရာတွေနော်...
ကျုပ်တို့ ကာလဖိုးနီးယန်းတွေကတော့ ကားဟောင်းပြင်ဖို့ဆိုရင် အပိုပစ္စည်းကို ဝင်ခနှစ်ကျပ်ပေးပီး ကားသင်္ချိုင်းမှာသွားနှိုက်တာပဲ၊ ဘရိတ်ရှူးဆိုရင်တော့ Dealer ဆီမသွားနဲ့ အပြင်ဆိုင်က After-market
အမျိုးအစားက ဈေးသက်သာသာနဲ့ဝယ်ပြီး ကိုယ့်ဖာသာဖြုတ်လဲပေတော့ ကိုယ့် Elbow grease ပေါ့ဗျာ၊ ဒီမှာကတခြားပြည်နယ်တွေနဲ့မတူ ကားမရှိရင် ခြေမရှိတာပဲဆိုတော့ ခက်တယ်။
အကိုရေ အလုပ်ကောင်းကောင်းမြန်မြန်ရပြီး ကားလေးလည်းပြန်ကောင်းလာပါစေ။
ခွိခွိ နာ့မှာ ကားမရှိဘူး သိဘူး
ထရောက်ခါစက ကားတ၀က်ကျ တစီးဝယ်စီးတာ ခဏခဏ ပြင်ရတာနဲ့ မကာမိလို့ ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး အိမ်မှာ အမြဲရန်ဖြစ်ရဖူးတယ်။ ကားပေးတဲ့ ဒုက္ခကို ကြုံဖူးလို့ ကိုယ်ချင်းစာလို့ တတ်ပါတယ်။
နောက်မီး မလင်းတဲ့ ကိစ္စလား
လူမှာ ဘရိတ်မမိရင်တော့ ပေါက်သွားပြီဆိုကြတယ်။
ဘရိတ် မမိရင် နံပတ် ဝမ်းကြီးနဲ့သာ ဆော်ပေတော့ ကိုငယ်ကြီးရေ .. ဟီးးး ဆီဖိုး က ပိုကုန်လိမ့် မယ် ။
နောက်မီး လင်းဖို့ကိစ္စ ကတော့ အပေါ်က အမကြီး သာ မေးပေတော့ .. သူက အတော်ကျွမ်းမဲ့ ပုံပါဘဲ ..ဟဲ ..
ဗမာပြည်က ကားတွေကတော့ အသက်ကြီးပေမဲ့လဲ ဈေးကောင်းနေဆဲပါ ။ လူတွေသာ အိုလို့ ဈေးကျ သွားကြတာလေ ။ အံ့သြ ကုန်နိူင်ဖွယ် .. ကားဈေးရယ် .
စွန့်စားလိုတဲ့ လူငယ်တိုင်း ဘရိတ်မမိသောကားကို စီးကြသည် ပေါ့ဗျာ။ အစ်ကို့ကားလေးက အိုသာအို တာ သစ္စာတော့ ရှိတယ်နော်။ နောက်မီးမလင်းဘူးလေ။
ကိုအောင်... အခုချိန်ထိ အလုပ်ကအဆင်မပြေသေးဘူးလား၊ ကြာနေပြီနော်၊ မိသားစုနဲ့ ဆိုတော့ အင်း....ကိုယ်ချင်းစာနားလည်ပေးလို့ရတယ်၊
ကားကတော့ပြောမနေနဲ့အကိုရေ..တော်ကြာ ဟိုဟာလဲ။ဒီဟာပြင်။ ရှုပ်ရှုပ်ယှက်ယှက်ဒုက္ခအပေးဆုံးဟာ
ကားဆရာ အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေ ...။
ကားလေးနှင့်အတူ ဆုတောင်းပေးနေပါသည် ...။
အိုသာအို တာ သစ္စာတော့ ရှိတယ်နော်။ နောက်မီးမလင်းဘူးလေ။ (နွေဆူးလင်္ကာ)
ပြန်ပြောလိုက်လေဗျာ.. ငယ်ငယ်တုန်းက တအားလင်းခဲ့ပါတယ်လို့...းP
အကိုက ကားမကောင်းလို့ စိတ်ညစ်နေရင်းတောင်